सेक्स गरेका र नगरेका महिला कसरी चिन्ने ?
महिलाहरु आफैमा प्राकृति रुपमा नै सुन्दर हुन्छन् । उनीहरुको सुन्दरताको सदाबहार तारिफ नै हुन्छ । तर, पुरुषको तुलनामा महिला बिहे लगत्तै नै शारीरिकरुपमा परिवर्तन भइहाल्छन् ।
के कारण छ ? सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्सका सोधकर्ताले हालै गरेको अध्ययनका अनुसार नियमित सेक्स गर्ने महिलाको शारीरिक बनावट केही मात्रामा परिवर्तन भए पनि दिनमा पटक–पटक सहवासमा लिप्त बन्ने महिलाहरुको नितम्ब अर्थात हिप फुलेर ठूलो हुने गरेको पाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार यो सर्वेका लागि महिलाहरुको हिपको सबै भन्दा ठुलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइयोको थियो ।
यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक–पटक यौन सम्बन्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार नियमित सहवास नगर्ने महिलाको भन्दा बढी थियो । सोधकर्ताको अध्ययनले यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनीहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् ।
जसको हिप ठुलो छ उनीहरुलाइ गर्भवती हुदाँ खासै समस्या नहुने भन्ने अध्ययनले देखाएको बताईन्छ । यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के भने महिलाको शारीरिक बनावटमा उसको वशांणुले प्रभाव पार्छ । खानपान तथा रहनसहनले पनि शरीरमा असर पर्ने भएकाले कतिपय महिलाहरुको नितम्ब अर्थात हिप जन्मदै ठूलो हुनेभएकाले त्यसप्रती पनि ध्यायन दिन जरुरी हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, जेठ ६, २०७६, ०२:०५:००